संसदमा आज २०७४/७५ का लागि बजेट पेस हुने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
संसदमा आज २०७४/७५ का लागि बजेट पेस हुने
सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:१५ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि आय व्ययसहितको बजेट सोमबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले सोमबार बजेट पेस गर्न लागेको हो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष बजेटको अन्तिम तयारीबारे आइतबार जानकारी गराउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी र बजेट महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनी समेतले बजेटका अन्तर विषयमा जानकारी गराउनु भएको हो । अर्थमन्त्री महराले व्यवस्थापिका संसद्मा सोमबार ४ बजे सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको आय व्यय प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब तीन अर्ब रुपियाँको सीमा तोकेको छ । यही सीमाभित्र रहेर सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । यस पटकको बजेटमा नयाँ किसिमका कार्यक्रम नसमेटिए पनि स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिएको उपप्रधानमन्त्री महराले यसअघि नै स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री महराले आइतबार नै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थितिको समीक्षा व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: गुगलले मनायो नेपाली गणतन्त्र दिवस
NEXT POST Next post: मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगित भयो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:१५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:१५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:१५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:१५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ १५, २०७४ ०५:१५